'Jiinsii fi Marxoo' Feestivaala Fiilmii Afrikaa 20ffaa Irratti
Ebla 09, 2013
WASHINGTON DC — ​Ebla 3 irraa jalqabee haga Ebla 9, bara 2013tti Feestivaalli Fiilmii Afrikaa 20ffaan magaalaa NiwuYoork keessatti geggeessamaa jira.
“Film Society of Lincoln Center” - ka jedhamu, waaltaa agarsiisa fiilmii walakkeessa NiwuYoorkitti argamutti ka geggeessamaa jiru - feestivaala kana irratti fiilmota biyyoota Afrikaatti hedduu agarsoosaman keessaa tokko fiilmii dokumentarii “Jeans and Marto” yokaan “Jiinsii fi Marxoo” jedhamuu fi seenaa dargaggoo Oromoo tokko irratti hundaa’e hojjetame. Roobaa Bulgaa Jiloo jedhama - dargaggoon kun. Tikfatee-bulaa Oromoo Karrayyuu irraa dhalate.
Mana-barnootaa yeroo jalqabaaf bara 1994/1995 dhaaba “Guddina Tumsa Foundation” yokaan GTF jedhamun Karrayyuu keessatti hundeessame keessatti ka barnoota isaa jalqabe Roobaan, gargaarsa dhaabichaatiin gara Finfinnee dhufee barnoota sadarkaa lammaffaas itti fufe. Akka itti Roobaan ganda dhalata isaa, Karrayyuu dhaa ba’ee gara Finfinnee dhufee fi haalli jireenya isaa itti jijjiirame hordofee uffata isaa, marxoo fi jiinsii, akka fakkeenyaatti fudhachuun mul’isa fiilmiin sun. Ennaa Robaan barnoota isaa sadarkaa dhaa sadarkaatti milkaa’inaan dabree koolejiitti deemuu fi ennaa koolejii xumuratu immoo gara uummata isaatti deebi’u – yeroo inni jireenya isaa aadaa ka ganamaa fi jireenya barnootaan argate walitti-araarsuu yaalu agarsiisa.
“Jiinsii fi Marxoon” feestivaalota fiilmii sadarkaa Addunyaa kudhanii ol irratti agarsiisamee simannaa gaarii argatee jira. Yeroo fiilmichi gidduu kana Feestivaala Fiilmii Afrikaa 20ffaa irratti agarsiisametti, Roobaan akka keessummaatti afeeramee achi jira.
Kooriyaan Kaabaa Misaa’ela Dhukaasuu Itti Fuftee Jirti
Yunaayitid Isteets Keeniyaa fi Moorookoo gargaarte
Waldhabiinssi Maalii fi biyyootan lixaa jabaachaa jira
Dhaabbanii Gargaarsaa Yunaayitid Isteets USAID'n Oromiyaaf Gargaarsaa Birrii Biiliyoonii 10.2 Taasisuu Beeksise
Godina Gujii Keessatti Hidhattoonnii Haleellaa Geechisan Jedhame
Shamarran Umriin 14 fi Sanaa ol Ta'an Talaalamuu Qabu: Ogeetti Fayyaa